We Fight We Win. -- " More than Media ": စစ်ကူရောက်လာသောတပ်ရင်း
ကချင်ပြည်နယ်အကျဆုံးများမှုကြောင့် လဂျာယန်းဒေသသို့ စစ်ကူလွှတ်လုိုက်သောတပ်ရင်း တရင်းကိုတွေ့ ရစဉ်။ တပ်ရင်းတရင်း ကို ၇၇၇ ယောက်ရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဖွဲ့ စည်းပုံမရှိတော့သဖြင့်
တရင်းတရင်းလျင် ၂၀ မပြည့်တော့ပုံကိုတွေ့ ရပါတယ်။
I don't believe what you mention above. It is impossible and totally rubbish.